Àjà udo (1-17)
Unu erila abụba ma ọ bụ ọbara (17)
3 “‘Ọ bụrụ na àjà ọ chọrọ ịchụ bụ àjà udo,+ ọ bụrụkwa na ọ ga-esi n’ìgwè ehi weta anụ ọ ga-eji chụọ ya, ma ọ̀ bụ oké ma ọ̀ bụ nne, ọ bụ nke ahụ́ dị mma ka ọ ga-ewetara Jehova. 2 Ọ ga-ebikwasị aka ya n’isi anụ ahụ. A ga-egbukwa anụ ahụ n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute. Ụmụ Erọn, bụ́ ndị nchụàjà, ga-efesa ọbara ya n’akụkụ niile nke ebe ịchụàjà. 3 Ọ ga-eweta ụfọdụ n’ime àjà udo ahụ ka ọ bụrụ àjà a na-esu ọkụ a ga-achụrụ Jehova:+ abụba+ kpuchiri eriri afọ ya, abụba niile dị gburugburu eriri afọ ya, 4 nakwa akụrụ ya abụọ na abụba dị n’elu ha bụ́ ndị dị n’akụkụ úkwù ya. Ọ ga-ewepụta abụba kpuchiri imeju ya, wepụtakwa akụrụ ya abụọ.+ 5 Ụmụ Erọn ga-esu ya ọkụ ka ọ kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà, n’elu anụ e ji chụọ àjà a na-esu ọkụ nke dị n’elu nkụ e sonyere n’ọkụ.+ Ọ bụ àjà a na-esu ọkụ, àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova.+ 6 “‘Ọ bụrụ na ọ ga-esi n’ìgwè ewu na atụrụ weta anụ ọ ga-eji chụọrọ Jehova àjà udo, ọ ga-eweta oké ma ọ bụ nne ahụ́ dị mma.+ 7 Ọ bụrụ na ọ bụ ebule ka ọ ga-eji chụọ àjà, ọ ga-eweta ya n’ihu Jehova. 8 Ọ ga-ebikwasị aka ya n’isi anụ ahụ ọ ga-eji chụọ àjà. A ga-egbukwa anụ ahụ n’ihu ụlọikwuu nzute. Ụmụ Erọn ga-efesa ọbara ya n’akụkụ niile nke ebe ịchụàjà. 9 Ọ ga-eweta abụba si n’anụ àjà udo ahụ ka ọ bụrụ àjà a na-esu ọkụ a ga-achụrụ Jehova.+ Ọ ga-ewepụta ọdụ ya bụ́ abụba abụba nke dị n’akụkụ ọkpụkpụ azụ ya, abụba nke kpuchiri eriri afọ ya, abụba niile dị gburugburu eriri afọ ya, 10 nakwa akụrụ ya abụọ na abụba dị n’elu ha bụ́ ndị dị n’akụkụ úkwù ya. Ọ ga-ewepụta abụba kpuchiri imeju ya, wepụtakwa akụrụ ya abụọ.+ 11 Onye nchụàjà ga-esu ya ọkụ ka ọ kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà ka ọ bụrụ ihe oriri,* ya bụ, àjà e suru ọkụ a chụụrụ Jehova.+ 12 “‘Ọ bụrụ na ọ bụ ewu ka ọ ga-eji chụọ àjà, ọ ga-eweta ya n’ihu Jehova. 13 Ọ ga-ebikwasị ya aka n’isi, a ga-egbukwa ewu ahụ n’ihu ụlọikwuu nzute. Ụmụ Erọn ga-efesa ọbara ya n’akụkụ niile nke ebe ịchụàjà. 14 Ihe ọ ga-eweta ka e jiri chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ bụ abụba kpuchiri eriri afọ anụ ahụ, abụba niile dị gburugburu eriri afọ ya,+ 15 nakwa akụrụ ya abụọ na abụba dị n’elu ha bụ́ ndị dị n’akụkụ úkwù ya. Ọ ga-ewepụta abụba kpuchiri imeju ya, wepụtakwa akụrụ ya abụọ. 16 Onye nchụàjà ga-esu ha ọkụ n’ebe ịchụàjà ka ọ bụrụ ihe oriri.* Ọ bụ àjà na-esi ísì ọma* a na-esu ọkụ. Ọ bụ Jehova nwe abụba niile.+ 17 “‘Unu erila abụba ọ bụla ma ọ bụ ọbara ọ bụla.+ Ọ bụ iwu ga-adịgide adịgide nke ọgbọ unu niile ga na-edebe n’ebe niile unu ga-ebi.’”
^ Na Hibru, “achịcha,” ya bụ, ihe e kenyere Chineke n’àjà udo ahụ.